I-China Marble YC102 abavelisi kunye nabathengisi Yingjiwei
Ukuxelisa i-marble YC102
Iimpawu zepaneli yobugcisa eyenziwe ngealuminiyam
1. Kulula ukucubungula kunye nokuhlukumeza iintlobo ezahlukeneyo zeepateni
2. Kulula ukuyifaka
3. Intle imbonakalo
4. Ubukhulu obahlukeneyo kunye nobukhulu
5. Ukufunxa izandi ezilungileyo
6. Ukhetho oluninzi lokuvula 8. Ubunzima bokukhanya
7. Ubomi benkonzo ende
8. Ukulungele okusingqongileyo, kunokubuyiselwa kwi-100%.
I-Aluminium yokuxelisa i-marble kunye nepaneli yelitye enye yeendlela zokuhlobisa, ezifanayo ne-marble, i-granite kunye nelitye.
Udonga lwempembelelo yemabula lubonisa uhlobo lwamafu njengomphumo notshintsho olwenzeka ngokuthe ngcembe kumbala, ubume obunzulu kunye nemvakalelo yobutyebi. Olu hlobo lwempembelelo yobugcisa lunokusetyenziselwa kumphezulu wangaphakathi wodonga okanye umphandle wangaphandle wesakhiwo. Njengoko ukutyabeka kufikelela kubukhulu obuthile, kunokukhusela nodonga lwezakhiwo.
Ukulinganisa iintlobo ezahlukeneyo zemarble zendalo, ezifanelekileyo iikholamu, imiphezulu yeetafile, iindonga kunye neminye imiphezulu.
Izibonelelo zepaneli yokulingisa yealuminium:
1. Kufanelekile kwiindawo ezahlukeneyo ezinemilo ekhethekileyo, enjengekholamu yamaRoma, ngaphakathi nangaphandle kwezinyuko ezijikelezayo kunye nezinye iindawo ezintsonkothileyo ezimile okhethekileyo;
2. Yonke yenziwe ngenkqubo yokutyabeka entsonkothileyo, ke ilula kakhulu kunamatye enesisindo, ubunzima bayo bungaphantsi kwesishumi samatye endalo;
3. Kukuxelisa okungeyonyani, kodwa iteknoloji yokuxelisa ebalaseleyo iya kwenza imveliso egqityiweyo ngombala wemabhile wendalo, umbala, umhle kwaye unesisa.
4.Ukuqina okuphezulu kunye namandla.
Igama lemveliso I-Aluminium yokuxelisa i-marble kunye neplanethi yamatye
Into No. YC102
Unyango oluphezulu Ukutyabeka kwe-PVDF / ukutyabeka Powder
Umbala marble kunye nelitye
Ukutyeba I-1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Izicelo Zilungele iindawo ezahlukeneyo zokuhlala nezokusebenzela, imiqadi neekholamu, iibhalkhoni, iieyi, imiphezulu yeetafile, ihotele, isibhedlele, i-villa, isikhululo, isikhululo seenqwelomoya, indawo yokwenza umthambo, indawo yokuthenga kunye neholo yemiboniso kunye nesakhiwo sentengiso.
Egqithileyo Iphaneli yokutya okuziinkozo yeYC204
Okulandelayo: Iphaneli yokushicilela ye-UV YA503